a tsotsotra olom-pantatra
Ny fifandraisana eo amin’ny olona roa, lehilahy sy ny vehivavy dia tsy maintsy hanadihady sy hanampy amin’ny fanatanterahana ireo andraikitra roa. Ny olona tonga amin’izao tontolo izao sy ny ara-panahy manokana Entany. Rehefa olona miasa ny tsy fahalavorariana teo aloha, hahazo ny vaovao tsara koa ny hetsika ho amin’ny lalana marina.
Eo amin’ny fiainantsika dia ireo izay tena mazava tsara ary tena afaka hanampy hiatrika ny ilaina ny olana na mba hanome ny ilaina tosika. Zava-dehibe ny mahatsapa lalina, mba jereo ny sehatra midadasika sy tsy matahotra izany. Rehefa dinihina tokoa, izao tontolo izao dia tsy voafetra ihany ny zavatra mahazatra, tsara, ary indraindray napetraky. Mendrika ny fianarana ny fitiavana, fanekena ny tenantsika sy ny olon-kafa, fa tsy manome ny»tsinontsinona»sy fanafahana, raha toa ka mitaky izany ny toe-draharaha.
Indraindray mpiara-miasa ao amin’ny fifandraisana ka miahiahy izy na dia tia ny amin’izao fotoana izao ny solontena voafidy. Indraindray handevina ny tenany, rehefa afovoan izao Tontolo izao ho tonga olona iray. Ny fitiavana raha amin’ny tenany, na dia manahy be loatra momba ny fiankinan-doha fa ny foto-kevitra ny faniriana dia tsy misy intsony ny misaraka, tsy manam-paharoa manerantany, sy tsotra lasibatra.
Ny tanjona izay manome antsika ny zavatra ilaintsika
Fitiavana miantso ny fampiharihariana ny hevitry ny anatiny fahaiza-manao, faniriana mba hanome sy hanome, tamin’izany fotoana izany, toy ny fiankinan-doha manaisotra ny farany ny hery mafy sy tsy mitaky zavatra betsaka kokoa noho ny halehiben’ny amin’ny ankapobeny izay azo atao. Mpiara-miasa ireo dia tsy maintsy mahafeno ny zavatra andrasana avy amin’ny tsirairay. Manana ny antony ny fihetsika fomba iray na hafa, ary koa ny fomba miavaka, izay mety ho fomba iray nandritra ny roa, vonjimaika na maharitra, ary afaka na oviana na oviana tena ho niampita. Toy ny fitsipika, miankina fifandraisana»tany»sy manimba, satria mahafaty faniriana naratra nohaniny ny hahazo fahatokiana amin’ny ny amin’izay ho lany ny malala hevi-dravina. Amin’ny fifandraisana mirindra mijanona ho mpiara-miasa miaraka amin’ny tanjona iraisana ho amin’ny fiainana, fa ny tsirairay dia misaraka manontolo toetra.
Tsy misy fahazoana ny ampahany
Misy roa ny olon-dehibe izay namorona Union mifototra amin’ny fanajana, fanekena ny tsirairay sy ny fiaraha-andraikitra. Izy ireo dia tsara miaraka, fa misaraka amin’ny faniriana dia tsy manimba, fa manafana ny hafanana sy ny adequacy ny heviny manoloana ny olon-tiana iray. Ny faniriana mampiray amin’ny mpiara-miasa, na inona na inona fa alahelo sy ny fahadisoam-panantenana mba hitondrana tsy afaka. Ny herin ny fihetseham-po amin’ny miankina fifandraisana mampitombo ny fahatsapana ny tsy fahazoana aina, nefa tsy noho ny faniriana hitady tsirairay ny hianatra
Frantsay Chat - Chatroulette Frantsa →